Kpido: nnwale ọhụrụ
Ịgụ Oge: 3 nkeji Maka ndị mmepe ngwa gam akporo, Nlekọta Google Play nwere ike ịnye nghọta bara uru ma nyere aka nwekwuo nrụnye. Rungba ọsọ A / B nke a haziri nke ọma na nke a haziri nke ọma nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti onye ọrụ ịwụnye ngwa gị ma ọ bụ onye asọmpi. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ oge ebe elere ule n'ụzọ na-ezighi ezi. Emehie ndị a nwere ike ịrụ ọrụ megide ngwa ma mebie arụmọrụ ya. Nke a bụ ihe nduzi maka iji Google Play Experiment maka ule A / B. Settọlite ​​nnwale Google Play You nwere ike ịnweta ya